Home Wararka Dikatoornimo ama Dimoqraadiyad: “Ninkii Iraraayo hay Rartee Aniga Rootiyaan Rabaa!!!!”
Dikatoornimo ama Dimoqraadiyad: “Ninkii Iraraayo hay Rartee Aniga Rootiyaan Rabaa!!!!”
Maanta waa maalintii loo dhameyn lahaa reer K/Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo oo marka ay dowladdu saarto kursiga madaxweynenimada qofka ay wadato laga wareejin doono xaruunta maamulka dawladda cusub, taas oo loo rari la doono magaalada Baraawe.
Arrintaas oo looga gol leeyahay:
In beelaha xoogan ee digil iyo Mirifle halkaas looga takhaluso.
In la geeyo degmada Baraawe oo hooy u noqon doonta ciidanka Itoobiya ka imanaya.
Degmada oo ay horaba u joogaan ciidanka calooshoood u shaqeystayaasha ah ee Blackwaters oo uu leeyahay Erik Prince.
In Xamar loo dhoweeyo oo talooyinka iyo go’aamada ay ka soo fulaan villa Somaliya.
In awoodda ay Digil iyo Mirifle ku yeesheen siyaasadda Somaliya la wiiqo laguna celiyo halkii ay joogeen markii ay jirtay dawladdii uu hogaaminayey Farmajo adeerkiis Maxamed siyaad.
In cashar loo dhigo maamulka Jubbaland oo isagana dhowaan laga hawlgali doono, loona soo rarayo magaalada Bu’aale si Marreexaanku ay gacanta sare ugu yeeshaan maamulka Jubaland.
Haddaba waxaa muuqata in uu dalka ka socdo isbadal xoog leh oo keeni doona inuu dalku galo dagaallo sokeeye oo waa haddii dadka Xamar ku nool ee 3m ah oo aan wax cod lahayn ay iska diidaan inuu soo noqdo xukun kali talis ah ama uu gacanta u galo koox ma naxayaal oo muddo kale ka lumiya Somaliya, ugu dambeyntasa la iska xoreeyo.
Marka la eego sida:
Loola dhaqmay Galmudug oo la kala qeybiyey.
Loo khasbay K/Galbeed oo dadkeeda lagu laayey si ay isu dhiibaan oo loo dulsaaro maqaarsaar aan u adeegeynin danaha reer K/Galbeed.
Loola dhaqmay barlamaanka oo la iibsaday xildhibaanada badankood.
Loola dhaqmay gudoomiyaha Barlamanka oo la go’doomiyey kadib markii hay’addiisii lala maamushay oo k/xigeenadiisii laga horkeenay.
Loo dalbaday ciidamada Erateriya iyo Itoobiya oo loo isticmaali doono in lagu caburiyo Somaliya, gaar ahaan dadka Xamar deggan oo ay suuragl tahay inay ka gilgishaan haadaanta uu dalku ku sii socdo.
Loo adeegsaday si gaar ah siyaasiyiinta iyo culimada muddullood oo hal jilib u badan sida labadii nin ee Xamar ku gumaaday shacbiga 2006, xusuuso Xamar Bile iyo Bakaaraha iyo PM, iyagoo Itoobiya adeegsanaya kuwaas oo ku faana inay dadkaas laayeen; Waa Cali Maxamed Geedi iyo Salaad Cali Jeelle. Sheekh Cali Wajiis iyo Muxudiin Xasan Afrax ayaan iyagana ay tahliishu gaartay, waxayna ragaan iyo kuw qabiilada kale ku shirbeen “ Ninkii i Raraayo Hay Rartee Aniga Rootiyaan Rabaa”.
Ugu dameyn waxaa soo muuqata xaalad khatar ah oo nin waliba gurigiisa loogu geli doono ee wixii Baydhabo ka dhacay Xamar ku suga ama ka hortaga waa labada hortaalla siyasiyiinta, culimada, dhaqanka, aqoonyahanka iyo Shacabka Muqdisho.
Previous articleMaxaa ka cusub Magaalada Baydhabo
Next articleWareegga Koowaad doorashada K/galbeed oo lasoo gabagabeeyay
Ergayga Qatar oo la kulmay Farmajo, Fahad & Rooble..
(Toos u daawo) Maxaa ka soo baxay kulankii Madaxdii hore iyo...